Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဖန်ဆင်းခဲ့သော ကံ့ကော် အလွမ်း ချစ်သူ့ပေးစာ
Writer Sein Lyan Time 1:08 pm
ကိုဖိုးစိန် ရဲ့ဆရာမလေးခိုင် ချစ်ခြင်းဖွဲ့ ကိုဖတ်ရင်း မျက်စိထဲမှာ UFL ၊ အင်းယား ထဲက အရမ်းချစ် အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲကို မြင်ယောင်လာတယ်။
လူချစ်လူခင်များခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကို ကျောင်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အမှတ်တရသတိရရှိနေကြတာကို ဖတ်ရင်း ထပ်တူမုဒိတာပွားမိပါတယ်။
အမြန်ဆုံး ချစ်သူ နှင့် လက်တွဲပြီး သာယာတဲ့အနာဂတ်ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။
အဟတ် မိုက်တယ်.ဗျာ.. ကိုစိန်ကတော့..
ကို့ကို ချစ်တဲ့ ခိုင်.. မတရာဘူး.. ကျနော်လဲပြန်ရေးမယ်..
ကိုစိန်ကို ချစ်တဲ့ ဆိပ် အဟီး..(ညီအစ်ကိုလိုပြောတာပါ)... အဟဲ ကိုစိန်ရင်တွေခုန်သွားပုံရတယ်..
ဖတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာ လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်လေးဖြစ်သွား မိတယ်။ကျန်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ မျှော်နေရတဲ့ ဘ၀ ကအတူတူပဲ လေ။စာဖတ်နေရင်း ပုံရိပ်တွေ ပြန်ပေါ်လာမိတယ်။
စာတကြောင်းတိုင်း အတွက် စာနာ နားလည်စိတ် တွေ
၀င်ရေးထားသလား ထင်ရလောက်အောင် ထိထိရှရှ ဖြစ်မိပါတယ်။
(ချစ်သူကို ဒီပို့စ်လေး ပေးဖတ်ရမယ်)
ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ခိုင်လေးပဲနော်။ ဖွဲ့ထားတာလေးကလည်း နှစ်သက်စဖွယ်ကောင်းလွန်းတာ။
ဖိုးဖိုး အလွမ်းတွေ လျော့လို့ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ခိုင် ...ဘဲဥဟင်းလာပို့သွားတယ် ကိုရေ ...
ဘဲဥစားမှ နေကောင်းမယ် ။ ခိုင်တို့ နှစ်ယောက် မြန်မြန်နီးရမယ် လို့ ကြွေ ဗေဒင် က ပြောထားတယ်လေ ။
အဲဒီတော့ ကို မကြိုက်လဲ အောင့်ပြီးစားပါနော် ..
(ခိုင်လူကြုံ နဲ့ ထဲ့ပေးလိုက်လို့အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပို့ သွားပြီနော် ... မစားဘူးလား ၊ စားမလား ။ ပြော...)
ကဖိုးစိန်လေး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...ဟဲဟဲ
မကြီးကိ ...လာနောက်သွားတယ် .
This post makes me miss my old fri from UFL, lovely moments that we had, old and boring buildings OB, NB & LRC & small canteen & that tree near the entrance. Thanks for this post.
ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ယူအက်ဖ်အယ်လ်ကို သတိရသွားတယ်။
ကိုနော်ကို.... ဟင့်.... :P
ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင် ၊ မောင်ချစ်တဲ့ချစ်ချစ်
း) အရေးအသား အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. မူပိုင်ရှင်မကြီး မမခိုင်ပေါ့လေး) အင်း ချစ်ခြင်းလေးကို ရေးဖွဲ့ထားတာ ရင်ထဲထိ ခံစားမိပါတယ်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဒီလာခဲ့ အကုန်ရစေရမယ်း)း)
ရှင်နော်ရှင်.. အဲ မှားကုန်ပြီး..
အဲလိုရေးသားထားတဲ့ စာမျိုး တစ်စောင်လောက်သာ ရောက်လာရင် ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး စိတ်ကူးတောင် ယဉ်မိတယ်..
ခိုင်နဲ့လည်း အမြန်ဆုံး ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ယူအက်ဖ်အယ်လ် နဲ့ အင်းယားတောင်
ဖိုးစိန် အလွမ်းတွေစာဖွဲ့ထားတာလား မသိပေမယ့်
ညီမလေးခိုင်ကို မကြီးမြင်ဘူးကတည်းက ခင်သွားမိတာ
လေ.. ချောချောလေးမို့ ။
သူငယ်ချင်းတွေလို့ ရေးထားပေမယ့် ခိုင်က မကြီးရဲ့
မျက်စိထဲမှာ ထင်းထင်းလေးနဲ့ လှနေတယ်။
ဖိုးစိန်ပုံမြင်တော့ ဖိုးစိန်နဲ့တောင် မလိုက်ဖက်ဖူး။ ဟဟ
ရေးခိုင်းဦး ကွန်မန့်ရှည်ရှည်. မဟုတ်တာတွေ လိုက်ရေး
မှ ရှည်ရှည်ရမယ်.း)))
ရေးထားတာလေးဖတ်ပြီး ခိုင့်ကို မျက်စိထဲမှာ ကွင်းကွင်း
ခိုင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ သဘောမတူနိုင်ဘူး ဖိုးစိန်ရေ.
အစ်ကိုရေ လွမ်းတေးဖွဲ့ စာတစ်စောင်ကို အလွမ်း ဓါတ်ခံရှိတဲ့သူ အဖြစ်နဲ့ ဖတ်လိုက်တာ
ဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားမှန်းကို မသိဘူး မိန်းမတွေ လွမ်းပြမှာကြောက်တယ်ဗျာ
ကံ့ကော်ပန်း အလွမ်း ပြေပါစေ :)
လွမ်းတယ် UFL ကို
း( ပြန်လျော်ပေး ...
ဓါတ်ပုံထဲကကောင်မလေးက ခိုင် လား..
မောင်ဖိုးစိန် အရေးကောင်း အမဂျူတောင်လွမ်းသွားတယ် အင်း အလွမ်းဆုံးကတော့အင်းယားပါဘဲ
အခုချိန်မှာမွန်းကျပ်လာတိုင်း အင်းယားမြက်ခင်းပြင်ပေါ်လှဲချပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂျလေဘီလုပ်ဘူးတာလွမ်းတယ် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဒီကသူငယ်ချင်းတွေကို သူတို့မသိတဲ့အင်းယားအကြောင်းကြွားရသေး။
ကိုကြီးစိန်ရေ သူများတွေက ဓါတ်ပုံဆိုလို့လိုက်ရှာတာ တွေ.ဘူးအေ... ကြည့်ချင်ပနော်... ချစ်သူတွေလွမ်းတဲ့အကြောင်း UFL အကြောင်းရေးပြန်ပြီ.. သူများလည်း လွမ်းတာပေါ့လို့ အဟိ...
ငါးနှစ်တောင် စောင့်နေရတာ..သနားပါတယ်၊ မြန်မြန်ရန်ကုန်ပြန်လေ၊ စင်္ကာပူဝင်မနေနဲ့တော့
ဟယ်... ရင်တွင်းဖြစ်ပါလားကွယ်ရို့.... အားကျသကွဲ့...:P
စောင့်ရတဲ့ ရက်တွေ လွန်မြောက်ပြီး
အတူနီးရမဲ့ ရက်တွေ မြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါစေ လို့ ဆရာမလေး ခိုင် နဲ့ ချစ်ညိ မျောက်မျောက်တို့ အတွက် ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဗျာ။
ဆရာမလေး ဘယ်လောက်ထိ ချစ်ပြီး လွမ်းဆွတ်နေလေသလဲ။ မျှော်လင့်စောင့်စား နေလေသလဲ ဒီစာလေးအရ လူတကာက သိနားလည်နေနိုင်တယ်။
မမ၀ါ ပြောသလိုပဲ။ ဆရာမလေး ခိုင် နဲ့ပဲ သဘောတူတယ် (မြင်တော့ ဖြင်ဖူးဘူး၊ စာလေးနြ့တင် သဘောတူသွားဘီ။ ချစ်နိုင်သလောက် သစ္စာ ရှိရှိ စောင့်နေနိုင်လို့)
ရုတ်ရုတ် ရှုပ်ရှုပ် လုပ်လို့ကတော့ ဂုတ်ဂုတ် ဂုတ်ဂုတ် ဖြစ်အောင် ဇက်ပိုးကို ခုတ်မယ်၊ ပုဆိန်နဲ့။ (ဆရာမလေး ခိုင်အတွက် ၀င်ကြိမ်းသွားပါတယ်)
အလွမ်းတွေကို ချပြပြီး ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ သစ္စာကို လှစ်ပြသွားတဲ့ စာကောင်းလေး တစ်ပုဒ် ပါ။
(အိမ်က စက်မကောင်းလို့ ချက်ချင်း မမန့်နိုင်တာ စိတ်မကောက်ပါနဲ့ဗျို့)
မောင်လေးရဲ့ ပန်းလေးပေးတဲ့ စာလေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။
မရောက်တာကြာသွားပီကိုဖိုးစိန်.. နေကောင်းပီဟုတ်း)
ဒါနဲ့ ဓါတ်ပုံပြဦး (မမခိုင်ပုံပြောတာနော် ဟိုဓါတ်ပုံ မဟုတ်ဘူး :P)
ငါ့ ခိုင် နဲ့ နံမည်တူ ဘာလို့သုံးတာလဲကွ....နာလိုဘူး နာလိုဘူး...